Mbola mitoka-monina i Hong Kong na dia nesorina aza ny fandrarana ny fivezivezena an’habakabaka ao amin’ny faritra · Global Voices teny Malagasy
Namoy ny satan’ilay maha-foibem-pitaterana an’habakabaka iraisampirenena azy i Hong Kong
Voadika ny 20 Avrily 2022 5:26 GMT
Sary nalaina tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Hong Kong tamin'ny 9 Aprily 2022. Nahazoana alalana.
Lasa iray amin'ireo tanàna mitoka-monina indrindra eran-tany i Hong Kong vokatry ny famerana henjana amin'ny fivezivezena noho ny politikan'ny zero-COVID. Na dia eo aza ny fiezahana hamaha ny famerana ny fivezivezena an'habakabaka tamin'ny 1 aprily, dia manohy manafoana ny sidina mivoaka sy manerana ny tanàndehibe ny zotram-piaramanidina.
Tamin'ny herinandro lasa, nilaza tamin'ny mpanao gazetin’ny Bloomberg sy ny South China Morning Post i Willie Walsh, tale jeneralin'ny fikambanana Sidina An’habakabaka Iraisam-pirenena (IATA) fa very ny toerana maha-fihaonan-dalan'ny sidina iraisam-pirenena an'i Hong Kong:
“Nigorisagorisa ny maha ivon’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena an'i Hong Kong. Tsy hita amin'ny sarintany izy ankehitriny ary heveriko fa ho sarotra ho an'i Hong Kong ny fiverenana amin'ny laoniny, ” hoy ny lehiben'ny IATA
Tamin'ny fikasana hifandray indray amin'izao tontolo izao, nilaozan’ i Hong Kong ny rafitra tondrom-pahamailoana ara-pahasalamana isa-paritra ary nesorina ny fandraràna tanteraka ny sidina ho an'ny firenena miisa sivy, anisan'izany i Etazonia, Fanjakana Mitambatra, ary Aostralia, nanomboka ny 1 aprily 2022. Ankoatra izany, nahena ho fito andro ny fepetra fitokana-monina tany amin'ny trano fandraisam-bahiny izay tsy maintsy atao.
Na izany aza, tsy nahafahan'ny zotram-piaramanidina handamina ny sidina mivoaka na mandalo an’i Hong Kong ny fepetra vaovao satria miziriziry ny hitazona ilay andiana “fitsipika mandrava zotra” ny manampahefana izay manasazy ny zotram-piaramanidina amin'ny fampiatoana ny sidina mandritra ny fito andro raha misy sidina iray amin'io zotra io mitondra mpandeha telo na mihoatra mitondra ny viriosy.
Manakana ny zotram-piaramanidina tsy handeha ho any an-tanàndehibe koa ny fitiliana COVID-19 mialoha ny sidina sy eo am-pahatongavana ho an'ny mpanamory fiaramanidina satria mety hisy ny fandefasana ny mpiasa ho any amin'ny toeram-panokana-monina.
Tao anatin'ny herinandro voalohany nisian’ny fepetra vaovao, zotram-piaramanidina miisa enina, anisan'izany ny Singapore Airlines, Emirates, Cathay Pacific, Qatar, Korean Airlines, ary Malaysia Airlines, no nandrara ny làlany tany Hong Kong noho ilay lalàna mandrava zotra.
Niteraka ny fitomboan’ny taham-panafoanana ny sidina ny fandraràna ny sidina, araka ny nasongadin'i David Webb, mpandinika ny tsenam-barotra any Hong Kong:
Sidina mitondra mpandeha miisa 14 ihany no tonga tao @hkairport omaly (5-Apr) avy amin'ireo 54 tany am-boalohany efa voalahatra, taham-panafoanana nahatratra 74%, indrindra noho ny fitsipika fandrarana sidina mahatsikaiky rehefa ahitana fitiliana miabo miisa 3. HK: Tanàndehibe Mitoka-monina any Azia.
Tena mampametra-panontaniana ny anton'ilay sazy, satria tsy voafehin'ny zotram-piaramanidina ny fiovana tampoka amin'ny valin'ny fitiliana COVID-19 atao amin'ny mpandeha. Nanamarika i Jerome Taylor avy amin'ny APF hoe:
Efa takiana – ny fanaovana fitiliana PCR ho an'ny fahatongavana rehetra ao anatin'ny 48 ora aorian'ny fipetrahana ao HK, ho an'izay rehetra mandeha fiaramanidina mankany HK – roa andro mialoha farafahakeliny.
Tsy misy na inona na inona ataon'ny zotram-piaramanidina, na ireo HKers miverina, momba ny olona ahitana valin'ny fitiliana + rehefa tonga.
Zotram-piaramanidina maro, anisan'izany ny Qantas, British Airways, ary Virgin Atlantic, izay miasa amin'ny zotra avy any amin'ny firenena voarara teo aloha, no nanapa-kevitra ny hanemotra ny fikasany handeha hiverina any Hong Kong.
Tamin'ny 10 aprily, nampiato ny zotra roa hafa avy any Istanbul ny manampahefana ao Hong Kong, tantanan'ny Turkish Airlines, sy Tokyo, tantanan'ny Japan Airlines.
Nidina ho 14 ny isan'ny sidina mitondra mpandeha voalahatra mialoha tamin'ny 12 Aprily:
14 monja ny zotra nitondra mpandeha sisa tonga ho an'ny anio (talata), izay nitovy tamin'ny talata lasa teo. Tsy nisy avy any Amerika, Afrika, Eoropa, Afovoany Atsinanana na Aostralazia. Betsaka noho ireo naato ny zotram-piaramanidina niala tamin'ny fitaterana mpandeha any #HK.
Tamin'ny volana Desambra 2019, talohan'ny valan’aretina, mahatratra hatramin’ny 33.999 isam-bolana ny isan'ny fiaramanidina miditra sy mivoaka ary mahatratra hatramin’ny 5,7 tapitrisa ny isan'ny mpandeha. Nidina ho 8.330 sy 86.000 ny isa tamin'ny volana Febroary 2022, araka ny antontanisa isam-bolana ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Hong Kong (HKIA).
Tamin'ny volana Janoary 2022, taorian'ny fipoahan'ny Omicron voalohany tao an-tanàndehibe, noraran'ny governemantan’i Hong Kong ireo mpandeha avy any amin'ny firenena miisa 153 noho ny rafitra filaharana loza ara-pahasalamana mety hitranga isam-paritra.
Noho ny “fitsipika mandrava zotra”, natao tampoka ny filazana fampiatoana, ary tompon'andraikitra amin'ny fanavaozana ny sidina handehanany sy ny hotely hitokanany monina ny mpandeha amin'ny sidina nofoanana.
Mandritra izany fotoana izany, miaro hatrany ny politika fampiatoana ny sidina i Carrie Lam, Lehiben'ny Mpanatanteraka ao Hong Kong, rehefa nanantitrantitra fa “voasoratra ao anatin'ny drafitra dimy taona faha-14 nataon’i [Shina] ny satan'i Hong Kong ho foibem-pitaterana fiaramanidina iraisam-pirenena.”
Niezaka nanokatra indray ny sisintaniny amin'ny tanibe Shina i Hong Kong amin'ny fitazonana ny fepetra mifehy ny valan'aretina mifanaraka amin'ny politikan'i Shina zero-COVID. Roa taona mahery aty aoriana, mijanona ho henjana ny famerana miampita ny sisintany manelanelana an’i Hong Kong sy i Shina ka mahavery ny satan’ilay tanàndehibe amin’ny maha-foibe iraisam-pirenena azy.